DP world oo shaqaleysiisay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka Israa’iil, si ula wareegto dekeda Sudan – Radio Baidoa
Shirkadda DP World ayaa shaqaaleysiisay Ben-Menashe oo ah sarkaal horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Israa’iil, si ay ugu ololeeyaan maamulka madaxweyne Trump oo ka taageeraya dalabkooda ah in ay maamusho dekada ugu weyn ee Suudaan.
Shirkadda ayaa saxiixday heshiis $ 5 milyan ah – oo $ 1.5 milyan oo doollar kamid ah horey loo bixiyay.
Suudaan waxay dekedeeda heshiis hore oo ku kacayay $ 2.4 la gashay shirkad Filibiin ah oo hoos imaanaysay Madaxweyne Cumar al-Bashiir. Laakiin golaha kumeelgaarka ayaa baabi’iyay heshiiskii bishii Abriil 2019, ka dib markii xukunka laga tuuray Al-Bashiir.
Saddex Xildhibaan kale Galmudug ah oo lagu dhawaaqay